Dhurva Raj Oli
हाम्रा युवाहरुले प्रदेशमा मात्रै पसिना चुहाउने छैनन । अब आफ्नो जिल्लाको निम्ती पनि छुट्टीमा घर आएको बेलामा पसिना चुहाउन राजीखुशी छन - त्यो पनि निस्वार्थ भावका साथ ।
जय सल्यानु युवा एकता ।
आट गरिसक्यौ , बोलीसक्यौ अब त गर्छौ गर्छौ । ✊ ✊ ✊
38कान्छू शर्मा पवित्र, Lovely Rawal and 36 others
Bus A-nta Srma Jay Salyan ✊ ✊ ✊ ✊
Tek Raj Oli जय सल्यान ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
SALYAN dhurva raj oli
35Lalit Chand Thakuree, Lovely Rawal and 33 others
SuMan BhanDari ✋
Unlike · Reply ·2· 29 mins
Dhurva Raj Oli replied ·5Replies · 26 mins
हाम्रो बुवा यदी छिमेकी अंकलको घरमा पाहुना पर्न जानुभयो भने त्यो दिनभरी हामीले हाम्रो घरको घरग्रिस्टी ठप्पै पार्नु पर्छ कि नाइ ??
जबाफ चाहियो ।
त्यस्तै देखियो देशमा । के गरौ अब हाम्रो घरमा ???
44कान्छू शर्मा पवित्र, Rupsingh Gharti Magar and 42 others
दिल्लीमा माधव नेपाल र सुशिल कोइराला आउँदा के कस्तो हल्ली चल्ली थियो सबै नजिकबाटै नियालीसकेको अनुभव छ । हाम्रा नेताहरुको स्वाभिवान, प्रोटोकल कतीसम्मको छ भन्ने आँखै अगाडी देखीसक्या छु पनि ।
Nepal Ambassay,Delhi , ICWAI भवन र JNU University को एउटा हलमा अन्तर्कृयाहरु बाहेक अन्य केही उपलब्धीमुलक कामहरु नभएको झल्झली नि देखिसकेको अवस्था हो । यताका प्रम, राष्ट्रपती, अनी अन्य राजनितिज्ञहरुसँग भेट गर्ने समय मिले / या उनिहरु राजी भए मात्रै भेटघाट हुने कुरा पनि थाहा नभएको कुरा होइन । अनी यता भ्रमणमा आएदिए बापत यहाँका महामहिमहरुले केही उपहारहरु दिने गरिन्छ । जसलाई दुई देश बिचको अनेक सम्झौताको नाम दिने गरिन्छ । अनी त्यइ कुरालाइ हामीले यस्तो गर्यौ उस्तो गर्यौ भनेर मिडियाबाजी गर्ने होड चल्छ । एउटाले राम्रो गरिम भन्छ . अर्कोले भारतपरस्त आरोप लगाउदै बस्छ ।
यो एउटा चल्दै आएको प्रथा जस्तै हो । अझै पनि निरन्तरता पाउने गरिन्छ ।
तस्बिरमा माधव नेपाल दिल्लीमा आउँदा ICWAI भवन बाराखाम्बा रोडमा आयोजित एक कार्यक्रम । माधव नेपाल र उहासँगै बसेका ब्यक्तीत्वहरु एउटा पुर्व नेपालका लागी इन्डियन राजदुत हुनुहुन्थ्यो अनी अर्को चाँही को हुनुहुन्थ्यो बिर्सें । मैले त्यो कार्यक्रम अबधीभर इत्ती पनि माधव नेपाल (नेपालका पुर्व प्रधानमन्त्री ) को त्यहा प्रोटोकल मिल्या जस्तो मानेको थिइन ।
तस्बिर खिच्न प्रतीबन्ध थियो । सानो मै थिए त्यहा उपस्थिती जनाउने मध्य ,त्यसैले लुकेर खिचेको तस्बिर हो यो है । यसकारण तस्बिर प्रस्टै छैन ।
36Tek Raj Oli, Nandram Yogi and 34 others
यो कुनै स्वर्ग जाने द्वार होइन । यो सल्यानको सदरमुकामबाट देखिएको एउटा सिन हो । विशेषगरी बर्खा मौसम र जाडो मौसममा तुवाँलो र बादलले यी यसरी लुकामारी खेल्छन खलंगा आसपासका डाडापाखाहरुमा अनि देखिन्छन यस्ता मनोरम सिन खलंगामै । तस्बिर कैद गर्ने सल्यानी युवा Prajwal Adhikari विशेष धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ ।
बादलले छुट्टाएको दुई संसार ! 😍 😍 😍
District headquarters Khalanga lies approximately 500 km west of Kathmandu. The surrounding greenery hills, scenic grander and magnificent natural surroundings has enhanced the glory of Khalanga Bajaar .
‎Dhurva Raj Oli‎ to Salyan Drishtikon- public group
यो कुनै स्वर्ग जाने द्वार होइन । यो सल्यानको सदरमुकामबाट देखिएको एउटा सिन हो । विशेषगरी बर्खा मौसम र जाडो मौसममा तुवाँलो र बादलले यी यसरी लुकामारी खेल्छन खलंगा ...
27Tek Raj Oli, Ramesh Oli and 25 others
भएर नि के गर्नु ? - जानै नपाएसी !
U can also check via this link : http://election.gov.np/election/np/bbvrs
48Birendra Kc, Sangam Bihani and 46 others
Aaditya Sharma same here Daju
एउटा यस्तो प्रोटोकल :
नेपालकी राष्ट्रपती बिद्यादेबी भण्डारी = भारतका महिला तथा बाल विकास राज्यमन्त्री कृष्ण राज ।
तै पनि हामी मक्ख , राष्ट्रपती त झनै मक्ख !!
नेपालमा उहाहरु आउँदासम्मको अवस्था के हुने गर्छ । सोचौ त ।
नयाँदिल्लीमा राष्ट्रपति भण्डारीलार्इ राज्यमन्त्रीको स्वागत
नयाँ दिल्ली । भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी
41Deepak Bohara, Nandram Yogi and 39 others
Tej Kiran Oli Dai only rare people get rare gesture
Tej Kiran Oli replied ·2Replies · 1 hr
क्लियर कुरो । पहिला बोल्ने हो । माहोल तताउने हो । अनी काम गर्ने हो । गुप्चुपमा काम गर्ने हाम्रो आदत छैन । अली अली बोल्दैमा यत्तीको माहोल छ भने गरेर देखाइदिए झन कस्तो हुने होला माहोल ??
67Nandram Yogi, Dipen Bhandari and 65 others
Dhurva Raj Oli रुकुम काठमान्डु सम्पर्क समिती Admin jyu angry reaction kina hola kei bimati xa ki vandinu hos na ...
रुकुम काठमान्डु सम्पर्क समिती sorry hai sir
testo hoina angry ma click vayaxa
Dhurva Raj Oli replied · 1 Reply
Tara Kc Ho garne lai garna dinu parxa yo khutta tanne prabriti kahile samma yo sapana lai pura garna bidesh bta vaya pani dukha garera salyani janta haru lagi pareka xan tapai haru npl mai ani salyan mai vayara ni ali chaso ta dekhaunu agrag mohaday
" राजनीतिक गन्ध आयो रे सल्यान गेट निर्माण अभियानमा " । कहाँ कहाँसम्म गन्ध आयो ? कस्तो थियो गन्ध - काङ्ग्रेसी जस्तो कि ? एमाले जस्तो कि ? माओबादी जस्तो कि ?? कस्तो !! त्यो पनि आरोपसंगै प्रष्ट पारीदिनु हुन्थ्यो कि ???
स्मरण रहोस कि यो अभियान स्वतन्त्र सल्यानी युवाहरूको साझा अभियान हो । यसमा आबद्द भएका जम्मै हामी युवाहरु स्वतन्त्र सल्यानी बनेर 'जय सल्यान'को नारालाई आत्मसात गर्दै अगाडी बढीरहेका छौ । राजनीतिक स्वार्थबाट माथी उठेर केही राजनीतिक ब्यक्तित्वहरु यस अभियानमामा आबद्द हुनु भयो भने यसमा आपत्ति किन ? कृटिसिजम किन ??
उहाँहरुले जिल्लाको निम्ति केहि गर्छौ है ! भन्नु कहाँनेर गलत हुन्छ ?? यो त झन स्वागतयोग्य र प्रेरणादायी कदम होइन र ??
बुझिराख्नु होला सल्यान गेट कुनै राजनीतिक दर्शन , बाद या सिद्धान्तले बन्ने होइन । यो त सल्यानी युवाहरूको जिल्ला प्रतिको भावनाले बन्ने हो । सल्यानी युवाहरूको नवीनतम जोशले बन्ने हो ।
107Mangolian Kto Maikal, Prakash Babu Kshetri and 105 others
Amar Oli Very good
Madhu Giri दाङ सल्यान सिमानामा कालाखोला होइन होला गोठेरी खोला भन्दा अगाडि राम्री भन्दा यता जस्मा दाङ सङ्ग सिमाको पनि बिबाद छ, धुर्ब जि ।।।
Madhu Giri replied ·4Replies ·4hrs
Rajesh Giri 100%right
Chitra Devkota धेरै पछि नागरिक एकता र सद्भाव काे गन्ध अाएकाे हुनाले केही लाई नमिठाे लाग्न सक्छ,तर केही छैन कृया प्रतिक्रिया अानु विज्ञानसम्त नै हाे
आज धेरैपछी लामो समयसम्म बत्ती गयो यता - झन्डै १ घण्टा !!
कतै यो हाम्री राष्ट्रपतिज्युको सम्मानमा त थिएन ??
उहा आजै यता सवार हुनु र आजै अलीक लामै समयसम्म नै यता बत्ती कट्नु एउटा संयोग मात्रै हो कि अरु नै केही हो ???
ना बराबर बत्ती जान्थ्यो । आज त पुरै १ घण्टा जो गयो - निकै पछी । के बुझम मैले । 😂 😂
71Nandram Yogi, Såjãñ Süñãr and 69 others
Gobinda Sharma katai rastrapatiko apaman ta hoina
Gobinda Sharma replied ·6Replies ·7hrs
It's okay to be Different !!
I am very much happy with my own kingdom ........
So, I am the `KING´ for my `OWN KINGDOM´ !!!
My Life My Rules ...
38Chandra Prakash Budha Magar, Shrddha Xettri and 36 others
9 hrs · Bangalore ·
रिङ्गरोडको झन्डै ३ घण्टा लामो जाममा परेर यता आउने प्लेन छुटाएको कुरा स्मरण गर्न बिबस भए ।
नेताज्युहरु जादा = भ्रमण
हामी जनताहरु जादा = यात्रा
96Khum Raj Dc, Nandram Yogi and 94 others
Késháb Jüñg Dáñgí २०७४ सालको सुरुवात धमाकेदार रह्यो ४ दिनमा ३ दिन सार्वजनिक बिदा। जय होस हामी सबैको :P
Pavitra Subba Shrestha Janata ko sarkar bhanne Janata lai dukha dine.
Padeshi Kanxo Rocky sahi ho mama hamro deshka neta haru ko kehi kam xaina khali kurshi ma basujel varman garnu ra aafako aafno khalti varnu thik hunxa rajinama diyo vane jhan ke desh@ banaulan ra@ hamro neta@ haru tehi vayar hola india ma khoel...See more
ब्राह्मण केटाे लालमणि दाहाल ईच्छाएकाे ब्यक्ति जाे भएपनि हुन्छ भ्रमण मा नेपालमा सार्वजनिक विदा त टन्न पाईन्छ ।